प्रतिनिधिसभामा को-को हुँदैछन् इन र आउट ? - EAAWAJ (इ-आवाज)
प्रतिनिधिसभामा को-को हुँदैछन् इन र आउट ?
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । अब समानुपातिकबाट आउने १ सय १० मा को–को पर्छन् भन्ने धेरैको चासो छ । तर, अबको प्रतिनिधिसभामा केही चर्चित नेताहरु ‘इन्ट्री’ हुँदा केही भने ‘आउट’ हुने भएका छन् ।
यसैगरी नेकपा मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली पनि प्रतिनिधिसभामा देखिने छैनन् । दुबै संविधानसभामा समानुपातिकबाट गएका उनी यो पटक पनि बन्दसूचीको तेस्रो नम्बरमा थिए । तर, मालेले थ्रेस होल्ड नै कटाउन सकेन । झ्यालबाट कुर्सी फालेर बबण्डर गर्ने विश्वेन्द्र पासवान, स्लोकबाट सम्बोधन गर्ने राप्रपाकी कान्ता भट्टराई लगायत पनि प्रतिनिधिसभामा हुनेछैनन् ।
← इपिएल : चितवनको खराब सुरुवात, पोखरा १० विकेटले विजयी
प्रदेश ४ मा समानुपातिक सांसदमा महिलाको संख्या बढि हुने →